Somali – Welcome United
Difaac wada jirkeena
Umidobida ka hortaga cuunsurinimada, (Fashiisan) kalitalisnimo,
Runtii ma hayno waqti. Laakiin waqtiyada ay u baahanyihiin xulashadooda lama dooran karo.
Tani waa baaq loogu talagalay isdifaac iyo isku-xirnaanshaha – wax ka baxsan. Addunka waa inaan iska ilaalino. Xaqiiqdii ma tiigsanayno xisbiyo dhiiri galinaya midab-takoorka dawladda illaa iyo inta sharciyada cusub ee magan-gelyo doonka ah iyo maalgelinta argagixiso Nazi Waa wax fudud. Haddii ay xaqiiqadu muujinayso waxa ay awood u leeyihiin, waanu tusi doonaa inaan wadajir u wadno. Taas oo aan fahamsanahay waxa halkaa ka dhacaya. Waan ognahay waxa loola jeedo in lagu difaaco mid ka mid ah nolosheedo iyo jiritaanka – in badan oo naga mid ah tani maaha markii ugu horeysay. Ma joojin doonno.
Sababtoo ah waxaan halkan joognaa, Saxony iyo meelo kale. Waxaan imanaayna, maanta iyo beri iyo mustaqbal kasta. Kuwa aan jeclayn waxay u baahnaan doonaan in loo isticmaalo. Qofkasta oo doonaya inuu ka hortago tani waa inuu bixiyaa qiimo siyasadeed oo sarreeya: Qofka dhintay ee xuduudaha dibadda ee Yurub, taxanaha dilka ah ee dawladda maal-galisay
Dhulka Soodhaweynta Bulshada Qaranka, weerarrada aan la tirin karin ee ku saabsan qaxootiga iyo hoygooda,
masaafurinta, ballaarinta caalamiga ah ee nidaamka xerada iyo weerarrada dadaallada wada-xaajoodka, badbaadinta madaniga iyo antifasismka. Qiimaha waa kala qaybsanaan iyo xayiraad xuquuqda, darbiyada iyo rabshadaha. Sicirku waa fasaxidda bulshada oo ku dhexjirta Saxony. Qofkasta oo doonaya inuu joojiyo nidaamkan ma heli doono jawaabaha Wahl-O-Mat, laakiin waa inuu dhexgalaa sheekooyin aan la tirin karin, oo aan la arki karin, oo ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa, xagjirnimada iyo foojignaanta. Suurtogalnimada adduunka kale ayaa halkan ka bilaabmaa, had iyo jeer iyo meel walba. Waxaan leexaanna iftiinka, waxaanna u leexannaa codka: Saxone waa isku mid waana ka ugu qurux badan marka loo eego dad badan.
Dhibaatadu ma ahan socdaalka
Aynu ka hadalno isbedelka midigta. Dhibaatadu ma ahan socdaalka, laakiin soo baxa fashiismka.
Xaaladaha ku yaal qaybo badan oo ka mid ah Saxonyada ma jiraan wax ka haray Jarmalka, ama shil aan caadi ahayn. Waxay qayb ka yihiin sii wadida joogtada saxda ah iyo sidaas darteed mustaqbalka suurtogalka ah – meel kasta oo khatar ah. siida darteedna wuxuu walwal ku noqonayaa qof walba. Cabsida ah in la galo waddooyinka fiidkii meelo ka mid ah, cunsuriyada iskuulada, dabiiciga ah ee aaminaadda maamulka iyo xarumaha: Dagaalka bulsheed xagjirsiin leh oo ka bilaabmaya cunsuriyada, laakiin ma joogsado halkaas. Weerarrada lidka ku ah weerarrada Chemnitz iyo meelo kale, ololaha AfD ee ka dhanka ah xarumaha bulshada, tiyaatarada iyo farshaxanka bilaashka ah, iyo sidoo kale weerarrada feminismka iyo dhibaatooyinka dadka LGBTQI waxay markhaati furaan. liiska musuqmaasuqa, dab-damiska laydhka, weerarrada booliisku caawiyaan waay dheeryiihin: Heidenau, Freital, Wurzen, Zwickau – iyo tan iyo Chemnitz dhammaan xuduudaha ayaa la dhaafey
dhamaan arrimahan waxaa loo riyaaqay oo loo dulqaadanayay sanado badan oo ay ka qaadeen Ra’iisul Wasaare Kretschmer, xukuumadiisa CDU iyo adeegga sirdoonka. Laakiin xuquuqda qadiimiga ah iyo kuwa cusubi maaha “muwaadiniinta walwalsan”, laakiin
cabsida Waxay garaaceen, dilaan oo necebyihin, soogalootiga, daawada antifascists, dhaqanka dhallinyarada, dumarka, farshaxanka, faragelinta. Waay necbaadaan sababtoo ah waan ka duwanahay ama sababtoo ah waxaan nahay
ha ka cabsanina midba midka kale. Waxay neceb yihiin qof kasta oo su’aal ka keenaya meelaha la isku hallayn karo ee qaranka, warshadda iyo qoyska. Waxay cadeynayaan bulshada badankooda inay noqdaan cadowga, ee maaha xukunka kuwa yar. Laakiin sheekadooda ku saabsan farqiga bani-aadamka waa wax halis ah: waxay abuurtaa shuruudaha qiimeynta bulshada iyo ka faa’iideysiga khadadka cunsuriyada iyo isdhexgalka.
Naziskii hore iyo kan cusubba waa xag-jirnimada waxa nagu haya maalin kasta. Oo iyana waxay leeyihiin xoog iyo itaal
saaxiibo. Farsamada cusub – Saxafiga, Booliska, Talyaaniga, Brazil ama Hungary – kuma dhici jirin cirka,
laakiin way ka baxday xagga sare. Meel kasta oo hodon ah, hay’adaha amniga iyo dawladaha ayaa qayb ka ah dhaqaalaha saxda ah ee cusub, kaas oo inta badan si farxad leh loogu soo dhaweeyay dhinaca hoose. Sidaa daraadeed aan u sheegno si aan caadi ahayn: Ma jiro wax la mid ah bulshada bulshada oo loo baahan yahay in lagu difaaco. “Bulsho caadi ah” waa adduun ka mid ah masaafurinta, midab-takoorka dowlad-goboleedka, joogtada ah ee “sii-haynta joogtada ah” iyo kala-takoorka, dhoofinta hubka, dhimashada Mediterranean iyo dembi-galnimada.
Dooro – difaac midnimo!
Laakiin taasi maahan. Aan ka hadalno waxkeena. Weli waxaa jira dad aan la rumeysan karin oo maalin walba la dagaallamaya khilaafka iyo garabka midig. Taas haka tegin. Dadka aan raali ka ahayn oo ay ku soo galaan, laakiin waxay sheeganayaan xuquuqdooda. Bautzen, Döbeln, Zwickau, Chemnitz, Plauen, Borna, Gorlitz, Ostritz, Dresden, Leipzig iyo meelo kale: waxaa jira dhinaca kale, albaabada iyo gacmaha u fura. Isku-duwashada kuwa leh mararka qaarkood waxay u taagan yihiin dhabarka derbiga, laakiin way ka fogaan waayeen. Noloshooda waxay halkan ka dhacayeen muddo tobanaan sano ah, siyaabo kale oo ka duwan kuwa kufsiga ee xagjirnimada. Halkaas waxay ka jiraan meel kasta – sheekooyin ku saabsan soogalooti la’aanta iyo dhaqdhaqaaqa is-sheegida. Sheekooyinka dhammaan kuwa naga mid ah ee sameeyey oo dhan wax kasta, oo aan loo oggolayn in la diro, la tarxiilo oo istaagaan dhulka.
Qaar badan oo naga mid ah ayaa ka tagay wakhti dheer ka hor haddii aysan ahayn shuruudaha deganaanshaha iyo waajibaadka ay u leeyihiin inay degaan. Kuwo badan ayaa lahaa oo kaliya ma’aha qaar rabay inay joogaan. Waxaan si fudud u joognaa halkan – iyo annaga naga mid ah
is-abaabul, geesinimo fara badan iyo bulsho rayid ah oo firfircoon, taas oo ah in kastoo ay jirto hanjabaad iyo hanjabaado isku-dhafan oo si cad u qeexaya: In Saxonyada, sidoo kale, qof waliba wuu dooran karaa- oo kaliya sanduuqa cod-doorashada – laakiin maalin kasta. Waxaan u hoggaansameynaa arintaan, tani waa caddayntayda mustaqbalka ee hadda. Isla mar ahaantaana: Aan ka hortagno socodka garabka midig si aan u soo rogono socodka marin-hawleedka xaqa ah ee loo maro dawladda AfD.
Taasi waa ugu yartahay hadda oo suurtagal ah.
Aynu bilowno caddaynta: Iskaashi dhexmara, wadajir iyo isbahaysi cusub. Kalsoonida ayaa ka badan erey. Kalsoonida ayaa ah xiriirka ugu quruxda badan adduunka. Kalsoonida waxaa loola jeedaa in sheekooyinkeena kala duwani aysan caqabad ku noqon halganka guud. Taas bedelkeeda. Doonista halganka guud waa wax ka badan ficil quus ah. Waxay noqon kartaa bilowga saaxiibtinimo weyn. Saaxiibtinimo kooxo isku-dhafan iyo abaabulo aan ku dhumin ama xirin afkooda, kuwaas oo isku dayaya inay hadlaan.
Iyo kuwa aan ka ordeynin ka dib markii garabka midig ee garabka midig loola jeedo, laakiin ay ka hor istaagaan- nolol maalmeedka. Waan ka weynahay sida aan u maleyno!
– in ay noqoto mid caam ah oo caalami ah waxa ka dhici dona bananbax aan kala sooc lahayn” 24 bisha 8 sideedad Dresden!
Iska Difaacaya Midnimada –kahortaga cunsuriyada iyo midab takoorka!
– maxkamad ku taal Chemnitz laga bilaabo 1 ilaa 3 bisha 11 kobiyo tobnad, halkaas oo aan ka helno aragtida dhibbanayaasha NSU iyo cadaymaha dhibaatooyinka muhaajiriinta ee ka dhanka ah kuwii dembiilayaasha ah. Waxaan ku eedeyneynaa!
– Inay ururiyaan deeqaha mashaariicda midnimada ee Jarmalka Bariga. Ku dheji lacagtaada halkaa oo ay tahay! TBA!
– si loola dagaalamo kali talisnimada iyo ka hortagga midab-takoorka , walaasha soogalootiga! Yaa doonaya in uu la dagaallamo, waa in aay is bartan! anay wada yimaadaan, samayana casho, riwaayado, iyo gogosha, isla markaana ay diyaariyaan basaska 24.08. – laga bilaabo Saksoniya iyo wadanka oo dhan!
– si aad buxiso, shabakada iyo taageerida anad iska u habeeysid, iska-hor-imaad iyo ka hortag cunsuri ah
– Inay ka hortagaan marka ay dhacdo in CDU Saxafi ama mid kale oo ka mid ah dhinacyada wadaxaajoodka wadaxaajoodka
oo leh AfD
– Kulanka 28-da July ee Dresden, halkaas oo aanu ka dhigi doono qorshooyin banan baxyo oo lawadaago oo kana fekerno waxa dhacaya xiiga